Malgré toutes les preuves le présumé meurtier de Lina Rasolofomanana est relaxé par la justice – Triatra du 17 octobre 2018 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Harimisa Noro VololonaMalgré toutes les preuves le présumé meurtier de ...
Malgré toutes les preuves le présumé meurtier de Lina Rasolofomanana est relaxé par la justice – Triatra du 17 octobre 2018
Taorian’ny fiakaran’ny raharaha teny amin’ny fitsarana, ny marainan’ny alatsinainy lasa teo, dia fantatra fa afa-maina ilay lehilahy voalaza fa namono nahafaty ny vadiny teny Manakambahiny herintaona lasa izay. Resy tanteraka ny fianakaviana. Io no azo ilazana ny valin’ity fanapahan-kevitra navoakan’ny fitsarana ady heloka bevava ity, taorian’ny famonjana azy herintaona sy roa volana teny Antanimora. Fahafahana madiodio, izay tsy noheverina hitranga mihitsy no didy navoakan’ny teo anivon’ny fitsarana ambaratonga ambony tamin’ny raharaha naha voarohirohy an’i Rado, izay voalaza fa nanosika ilay tovovavy antsoina hoe Lina Rasolofomanana, tany anaty hantsana mirefy 15 metatra.
Araka izany, nahagaga sy nanohina ny rehetra, indrindra fa ny fianakavian’ny maty ity didy nivoaka ity. Raha ny zavatra tsikaritra mantsy dia natao an-tsokosoko mihitsy ny fampakarana ny raharaha. “Tsy nahazo fampiantsoana izahay, fa olona no nahalalana fa efa vita ny fitsarana azy, ka nahazo fahafahana madiodio ilay nahavanon-doza. “ Tao amin’ny efitrano fahefatra misahana ny ady heloka bevava araka izany no nohenoina ny fiaiken-kelok’ity lehilahy nahavanon-doza ity, tamin’izany. Raha tsiahivina mantsy dia ny volana aogositra 2017 no nitrangan’ity toe-javatra mampalahelo ity teny Manakambahiny. Raha ny voalaza ihany dia nisy nahita ny fomba namonoany io vadiny io, ary feno avokoa ny porofo rehetra nanenjehana azy, izay tsy nisy azo nialana intsony tamin’ny fampakarana ny raharaha teny amin’ny polisy misahana ny ady heloka bevava, ka nitazonana am-ponja azy. Nandritry ny fijoroana vavolombelona tamin’ny nanolorana ny raharaha teny amin’ny fampanoavana araka izany, dia nilaza sy nanamarina ny olona nahita ny toe-java-nitranga, fa ity lehilahy vadiny ity ihany no nanosika azy tany anaty hantsana. Tsy nandà ny fiampangana aza ihany koa ralehilahy, fa efa mangeja azy avokoa ny porofo rehetra.
Nohamafisin’ny rain’ity vehivavy namoy ny ainy ity tamin’izany, fa efa nanatona teny anivon’ny fitsarana izy ireo hampakatra ny raharaha, izay tokony hivaly ao anatin’ny folo andro. Raha ny fandatsahan’aina misy porofo tahaka ity, tsy ahavidy aina mihitsy na ny vola aza.
[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »les-factures-etablies-par-la-societe-emergent-network-sur-la-base-des-produits-de-marque-cisco-sont-reputees-fausses-dapres-la-cour-dappel-dantananarivo » show-posts= »20″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date »]
Previous articleMinistère de la Justice à Madagascar quand l’exemple ne vient pas d’en-haut – la gazette de la grande ile du 16 octobre 2018
Next articleL’institution judiciaire malgache est atteint de la gangrène d’après Me RAKOTOSON Haja en commentant l’affaire Claudine